Software House - PYAY GTI
Posted by မောင်လူအေး on March 7, 2010 at 9:36am in Uncategorized
အသုံးတည့် Software များ၊ Link များ Share နိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ စစချင်း Gtalk Idle Software လေးနဲ့ စလိုက်ကြရအောင်ဗျာ။ဒီမှာ Download လုပ်ပါ။ Connection အခက်အခဲကြောင့် ဒီမှာ ကို Click ခေါက်ဖို့ အဆင်မပြေသူများ အတွက်...http://ifile.it/aobf81q/gAlwaysIdleSetup.exeအပေါ်က Link လေးကို Copy ကူးပြီး Paste လုပ်ပါ။နောက်ထပ် အသုံးတည့် Software များ ဝေမျှရင်း Help Each Other ကြပါစို့လား .... Pyay GTI-rian များ ခင်ဗျာ..:) Tags:
Permalink Reply by မောင်လူအေး on March 7, 2010 at 9:50am အင်တာနက် ခေတ်ထဲမှာ အလကား ရတဲ့ Software တွေ များလာတာနဲ့ အမျှ၊ ဟို Software လေး ကောင်းတယ်ဆို Download လုပ်လိုက်၊ Install လုပ်လိုက်၊ ဒီ Software လေးကောင်းတယ်ဆို Download လုပ် Install လုပ်လိုက်၊ များမကြာခင်ပဲ သုံးရ အဆင်မပြေလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အလားတူ ပိုကောင်းတဲ့ Software လေးတွေ ရလာလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Uninstall လုပ်လိုက်နဲ့ Software များ တပ်လိုက်၊ ဖြုတ်လိုက်လုပ်ရင်း လုပ်ရင်း စက်ဟာ တဖြေးဖြေး လေးလေး လာတာမျိုး ကြုံဖူးကြပါလိမ့်မယ်။
ဂလို ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းက Software တစ်ခု Uninstall လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် Software ရဲ့ အပေါ်ယံ Installation File လောက်ပဲ Uninstall လုပ်ချသွားတာ ဖြစ်ပြီး၊ Computer ရဲ့ System ပိုင်းထဲ ၀င်ရေးရတဲ့ Registry ထဲက အမှတ်အသား၊ အချက်အလက်များကို ဖျက်သွားခြင်း မရှိတဲ့ အတွက် Registry ထဲမှာ ဖိုင်များ တဖြည်းဖြည်း ပြည့်လာပြီး System ရဲ့ Performance ကို လာပြီး ထိ ခိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအတွက် Software များ Uninstall လုပ်တဲ့ခါ ၎င်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ file မှန်သမျှ ဖြုတ်ထုတ်သတ် လုပ်မဲ့ Uninstaller Software လေးတွေ သုံးသင့်တယ်လို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
အခု ဝေမျှမဲ့ Software လေးရဲ့ အမည်က Your Uninstaller 2008 ဖြစ်ပါတယ်။ သက္ကရာဇ် 2010 ရောက်နေပြီ၊ 2008 Version မသုံးချင်တော့ဘူးလို့တော့ မဆိုကြပါနဲ့ဗျာ။ 2008 Version လည်း သူ့အစွမ်းနဲ့ သူ ဆိုတော့ လောလောဆယ် သူ့ကို သုံးနေတာတော့ အတော် အဆင်ပြေတယ်ဗျ။
နောက်များ 2010 Version ရရင်လည်း တင်ပေးပါဦးမယ်။
အော် ပြောဖို့ မေ့တော့မလို့....
ခု တင်ထားပေးတဲ့ Software လေးက ဖွက်ကလိ ဒင်္ဂါး တစ်ချပ်မှ ပေးစရာ မလိုဘဲ သုံးနိုင်အောင် Crack ဖိုင်လေးပါ ပါတဲ့ Software လေး ဖြစ်တယ် ဆိုတာလေးပါ။
အားလုံးပဲ အသုံးတည့် ပျော်ရွှင်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါကြောင်း....
Your Uninstaller! PRO 2008 6.1.zip, 3.7 MB ▶ Reply
Permalink Reply by မောင်လူအေး on March 7, 2010 at 10:09am အင်တာနက်ပေါ် ဓာတ်ပုံတွေ တင်တဲ့အခါမှာ (အထူးသဖြင့် ဘလော့ရေးသူများ၊ ဖိုရမ်မှာ ပို့စ်တင်သူများအတွက်...) မိမိ တင်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးကို ကော်ပီရိုက်ချင်တဲ့ အတွက် Watermark လေး ထည့်ချင်တတ်ကြတာ ရှိပါတယ်။ မောင်လူအေးလည်း မိမိ ဘလော့ပေါ်တင်တဲ့ ဓာတ်ပုံများကို မိမိ ဆိုက်ရဲ့ လိပ်စာလေး တပ်တပ်ပေးလေ့ ရှိတယ်။ အဲလို တပ်ဖို့ အတွက် ယခင်ကာလများက ထစ်ခနဲရှိ Corel Photopaint ဖြစ်ဖြစ်၊ Adobe Photoshop ဖြစ်ဖြစ် သုံးတတ်တယ်။
Corel တို့၊ Adobe တို့က အင်မတန် ကောင်းတဲ့ Photo-editing Software ကြီးတွေ ဖြစ်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် Installer CD ရှိထားသူများ အတွက် အခက်အခဲ မရှိ သုံးနိုင်ပေမဲ့ သူ့ရဲ့ Software ထဲက ကိုယ်တွေ လိုချင်တာက Watermark လေးထည့်ထာလောက်ပဲ သုံးချင်တာ ဆိုတော့ Software တစ်ခုလုံးကြီး Install လုပ်သုံးရတဲ့အခါ စက်လေးတဲ့ ပြဿနာ ခဏ ခဏ တက်တတ်တယ်။
အဲဒီတော့ Watermark လေးပဲ ထည့်ချင်တာအတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး Software လေး တစ်ခုလောက် လိုချင်လာတယ်။
ဒီတော့ မေးပါများ စကားရ ဆိုတဲ့ အတိုင်း နည်းနည်း လှည့်ပတ် အာရိုက်လိုက်တဲ့ခါ ခု ပြောမဲ့ Photoscape ဆိုတဲ့ Software လေး ရလာပါတယ်။
Software တစ်ခုလုံးမှ 15.45 MB ပဲရှိတဲ့ အတွက် အတော်လေး ပေါ့ပါးတဲ့ Software လေးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိပ်စာလေးမှာ သွားရောက် Download လုပ်နိုင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း....
Permalink Reply by မောင်လူအေး on March 7, 2010 at 10:12am တီလုပ်စကားပြော လေ့ကျင့်ဖို့နဲ့ တီလုပ်စာရေး လေ့ကျင့်ဖို့အတွက် Software လေး တစ်ခုပါ။
Learn Chinese 2007 v5.11 Multilingual လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အောက်က လိပ်စာလေးမှာ Download လုပ်ပါ။
ဖွက်ကလိ ဒင်္ဂါး ပေးစရာ မလိုအောင် Crack ဖိုင်လေးပါ ပါဝင်ပါတယ်။
Permalink Reply by မောင်လူအေး on March 7, 2010 at 11:19am Electrical and Electronics သမားများအတွက် သင့်တော်တဲ့ Software ပေါက်စနလေး တစ်ခုပါ။ ပေါက်စနလို့ ဘာလို့ ဆိုရလည်းဆိုတော့ ဖိုင် အရွယ်အစားက Kilo Byte 200 ကျော်ကျော်လေးပဲ ရှိတဲ့ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ Four Band, Five Band, Six Band Resistor များ အပြင် Power Calculation ကိုပါ ထည့်ထားပေးတဲ့ ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ Software လေး ဖြစ်လို့ပါပဲ။
rccs12_portable.zip, 50 KB ▶ Reply
Permalink Reply by မောင်လူအေး on March 12, 2010 at 7:57pm ဒါကတော့ AutoCAD 2010 ပါ
Permalink Reply by မေ (SSH) on March 13, 2010 at 4:43pm အကို့ post တွေအကုန်လုံး အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်....
နောက်လဲ ဒီလိုအသုံးတည့်မဲ့ software (free ) လေးတွေကိုတင်ပေးပါဦး......
Permalink Reply by မောင်လူအေး on March 24, 2010 at 4:53pm ဂစ်တာတီးဖို့ ဂစ်တာ မရှိလို့တို့၊ ဂီတ၀ါသနာ ပါရဲ့နဲ့ အဆင်မပြေလို့ စက်ပစ္စည်းတွေ မရှိလို့ မတီးနိုင်ဘူး မဖြစ်ရလေအောင် ဟောဒီ fruityloops လေးက စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုအီးတီကတော့ တီးမယ် တီးမယ် ပြောပြောပြီး ဆော့ဖ်ဝဲ တောင်းတုံးက တောင်းသွားပြီး ခုထိ ဘာသီချင်းမှ ထွက်လာတယ်တော့ မတွေ့သေးကြောင်းပါဗျာ။
Permalink Reply by မောင်လူအေး on March 26, 2010 at 1:45pm Adobe Premiere Pro CS4 V.4 ရဲ့ Crack Software လေးပါ။ အေအီး သပြေသီး တောင်းဆိုမှုအတွက် အဆင်ပြေ ချောမွေ့လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါကြောင်း
AdobePremiereProCS4Crack.rar, 8.5 MB ▶ Reply
Permalink Reply by Thabyay Hlaing on March 26, 2010 at 2:20pm မချောမွေ့ပါဘူးမောင်ကလေးရယ်
You don't have permission to access "http://api.ning.com/files/UZDX75Wh37GplV3Xc09XB4gwtcLqUbTLM3jSXPjh7OWxpDb1OTRJzxck4OLEKwxP6xAkj5cwua52FEsmkqv6A-brW0nNLiAe/AdobePremiereProCS4Crack.rar" on this server.
မောင်လူအေး said:Adobe Premiere Pro CS4 V.4 ရဲ့ Crack Software လေးပါ။ အေအီး သပြေသီး တောင်းဆိုမှုအတွက် အဆင်ပြေ ချောမွေ့လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါကြောင်း ▶ Reply
Permalink Reply by မောင်လူအေး on March 26, 2010 at 2:24pm ချောမွေ့သွားအောင် ဒီလင့်လေးကို ကလစ်နှိပ်ပါကွယ် သမီးရယ်....
Thabyay Hlaing said:မချောမွေ့ပါဘူးမောင်ကလေးရယ် Access Denied
Permalink Reply by Thabyay Hlaing on March 26, 2010 at 2:32pm ရပီအေ့...............အစောကြီးကတည်းက ifile နဲ့တင်ပေးပါလားဟ.............ပိန်းတာကွာ......
ငါလုပ်လိုက်ရ.........:D ......ဟီး.နောက်တာပါ အဖေရယ်.......(အမေသိရင်တော့ပြောတော့မယ်....
မောင်လူအေး said:ချောမွေ့သွားအောင် ဒီလင့်လေးကို ကလစ်နှိပ်ပါကွယ် သမီးရယ်.... http://ifile.it/v5kuc1f
Thabyay Hlaing said:မချောမွေ့ပါဘူးမောင်ကလေးရယ် Access Denied You don't have permission to access "http://api.ning.com/files/UZDX75Wh37GplV3Xc09XB4gwtcLqUbTLM3jSXPjh7OWxpDb1OTRJzxck4OLEKwxP6xAkj5cwua52FEsmkqv6A-brW0nNLiAe/AdobePremiereProCS4Crack.rar" on this server.
Permalink Reply by မောင်လူအေး on April 1, 2010 at 3:52pm Microsoft Office 2010
NO SERIAL, NO CRACK
FULLY ACTIVATED !!!
Started by မောင်လူအေး in Uncategorized. Last reply by မောင်လူအေး Jul 21, 2013. ကျောင်းသားဘ၀ရဲ.နေ.ရက်ဟောင်းတွေ ပြန်လွမ်းကြမယ်
Started by thar maung in Uncategorized. Last reply by Aung Lin Wai May 3, 2013. Software House
Started by မောင်လူအေး in Uncategorized. Last reply by မောင်လူအေး Apr 20, 2013. Room Rental
Started by Kyaw Soe Minn in Uncategorized. Last reply by Zar Zar Phyo May 8, 2012. အချစ်ဆုံး ဆရာ၊ ဆရာမ ဘယ်သူလဲ ဖြေပေးကြပါ
Started by သူ စင် ကြယ် in Uncategorized. Last reply by Ko Thet Lwin Apr 7, 2012. History of Pyay GTI
Started by မောင်လူအေး in Uncategorized. Last reply by ကျောက်တန်း Feb 9, 2012. Useful Websites
Started by မောင်လူအေး in Uncategorized. Last reply by japangyi Jan 1, 2012. Engineering Ebooks
Started by AK in Uncategorized. Last reply by AK. Jun 26, 2011. SG Jobs
Started by thar maung in Uncategorized. Last reply by sawnaung Apr 14, 2011. Making T-Shirt for PYAY GTI
Started by မောင်လူအေး in Uncategorized. Last reply by You Paing Tin Oo Apr 3, 2011. အလုပ်များ တဲ့ ကျွန်တော်
Started by Kyaw Nyi Nyi Win in Uncategorized. Last reply by PETER NAY LIN SOE Feb 7, 2011. ကြားခဲ့သမျှ . . မှတ်သားစရာ . . .
Started by moezet in English Learning Jan 22, 2011. Ebooks Gallery
Started by မောင်လူအေး in Uncategorized. Last reply by minlattthein Nov 14, 2010. English Learning - Listening လေ့လာကြမယ်
Started by Myo Aung (95 EC) in English Learning. Last reply by Win Aung Oct 16, 2010. ဆရာကန်တော့ပွဲ . . အတွက် စုပေါင်း ဆွေးနွေးကြရအောင် . . . .
Started by moezet in Uncategorized. Last reply by Ko Wai Oct 13, 2010. ခေါင်းဆောင်မှု . . . အနုပညာ . . . .
Started by moezet in Leadership & Management. Last reply by WUNNA SOE May 22, 2010. Electrical & Electronics EBooks
Started by ZawMinTun in Uncategorized. Last reply by kyaw zayer oo Apr 19, 2010. အလုပ်အကြောင်း ပြောကြမယ်
Started by မောင်လူအေး in Uncategorized. Last reply by မောင်လူအေး Mar 4, 2010. ကမ္ဘာပျက် . . . မပျက် . . . .
Started by moezet in Uncategorized. Last reply by သူ စင် ကြယ် Jan 19, 2010. ACMV(Air-Conditioning ,Mechanical and Ventilation)
Started by Kyaw Soe Minn in Uncategorized. Last reply by soeeiphyo Dec 28, 2009. View All